03 Oktobra 2019 - FJKM Québec - Canada Maika ery isika hitady vonjy amin'ny Tompo, fa rehefa nivaha ny olana dia Izy no hadino voalohany.
2 octobre 2019 by Njaka Ramanandafy
JEREMIA 2 : 1-18
2:1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:
2:2 Mandehana, ka miantsoa eo anatrehan’ i jerosalema hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Tsaroako ianao, ny fahalemem-panahin’ ny fahatanoranao, ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina, fony ianao nanaraka Ahy tany an’ efitra, teny amin’ ny tany tsy mbola namafazana.
2:3 Masina ho an’ i Jehovah ny Isiraely sady santatra amin’ ny vokany; izay rehetra mihinana azy dia hohelohina, ny loza no hanjo ireny, hoy Jehovah.
2:4 Mihainoa ny tenin’ i Jehovah, ry taranak’ i Jakoba, ary ianareo, ry ankohonan’ ny taranak’ Isiraely!
2:5 Izao no lazain’ i Jehovah: Inona moa no heloka hitan’ ny razanareo tamiko, no dia nanalavitra Ahy izy sady nanaraka ny zava-poana, ka tonga zava-poana?
2:6 Ary izy tsy nanao hoe: aiza Jehovah Izay nitondra antsika niakatra avy tany amin’ ny tany Egypta sady nitarika antsika tany an’ efitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karankaina sady aloky ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan’ olona akory na nonenan’ olona?
2:7 Ary nitondra anareo niditra ho any amin’ ny tany mahavokatra Aho, mba hihinanareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy; kanjo nony tafiditra ianareo, dia nolotoinareo ny taniko, sady novetavetainareo ny lovako.
2:8 Ny mpisorona tsy nanao hoe: Aiza Jehovah? Ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala Ahy; ny mpitandrina koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin’ ny anaran’ i Bala ka nanaraka ny zavatra tsy mahasoa.
2:9 Koa dia mbola hifandahatra aminareo Aho, hoy Jehovah, sy hifandahatra amin’ ny zafinareo koa.
2:10 Fa mità ho any amin’ ny nosy Kitima, ka izahao, ary maniraha ho any Kedara, ka diniho tsara sy jereo raha mba efa nisy toy izao.
2:11 Moa misy firenena efa nanova ny andriamaniny va? Nefa ireny dia tsy andriamanitra akory. Fa ny oloko kosa efa nanakalo ny voninahiny tamin’ izay tsy mahasoa.
2:12 Talanjòna amin’ izany, ry lanitra! Ary matahora ka mangorohoroa, sy oria ianareo, hoy Jehovah.
2:13 Fa zava-dratsy roa loha no nataon’ ny oloko: efa nahafoy Ahy, loharanon’ ny ranon’ aina izy ka nihady lavaka famorian-drano ho an’ ny tenany izay mitriatriatra tsy mahatan-drano.
2:14 Moa mpanompo va Isiraely? Ompikely va izy? Koa nahoana no voababo izy?
2:15 Hamely azy no ampieronan’ ny liona tanora sy amoahany feo ka mahatonga ny taniny ho lao; nodorana ny tanànany, ka tsy nisy mponina.
2:16 Na dia ny Zanak’ i Nofa sy Tapanesa aza nanapatapaka ny satroboninahitra tamin’ ny lohanao.
2:17 Moa tsy ny nahafoizanao an’ i Jehovah Andriamanitrao tamin’ ny andro nitondrany anao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao?
2:18 Koa inona no anton’ ny ankanesanao amin’ ny lalana mankany Egypta, hisotro ny ranon’ i Sihora? Ary inona no anton’ ny ankanesanao amin’ ny lalana mankany Asyria, hisotro ny rano amin’ ny Ony?
Hitantsika eto ny fototry ny olana raketin’ny bokin’i Jeremia manontolo :
1-Niala tamin’ny fitiavany voalohany i Israely.
Hoy ny Tompo : « Tsaroako ny niraiketan’ny fonao tamiko …fony ianao vao nampakarina » (and2) . Moa tsy henontsika amin’izany koa ve ny feon’i Jesoa miteny amintsika hoe:’Tsaroako ny fitiavanao fony ianao vao noraisina ho mpandray, ohatra? Ary izao , manao ahoana » ? Eto , ny fialan’i Israely dia tsy misy antony mari-pototra « . »Inona moa no tsy marina hitan’ny razanareo tamiko no dia nanalavitra Ahy izy sady nanaraka Ahy izy sady nanaraka ny zava-poana , ka dia tonga zava-poana koa izy? » (and5) , hoy ny Tompo . Satria ny nanasoa azy no hany nataony « nitondra anareo niditra ho any amin’ny tany mahavokatra Aho » (and 7) ,kanjo nony tafiditra ianareo dia nolotoinareo ny taniko. Mampalahelo!
2-Lasa nila vonjy tany amin’ny firenen-kafa izy
Manontany azy ny Tompo : » inona no anton’ny hankanesanao amin’ny làlana mankany Egypta ?Ary inona no anton’ny hankanesanao amin’ny làlana mankany Asyria? (and 18). Tsy misy antony tokony hihazakahana hila vonjy any. Ny fiverenany amin’ny Tompo no hany ilaina . Mampandini-tena antsika izany , rehefa miala amin’i Jesoa isika , ka banga ny toerany ao ami’ny fiainantsika , dia hitodika any amin’ny hery hafa sy olona hafa tsy hahavonjy isika.